Kubad gaar ah
Saddex Waddo Ball
Birta Kursiga Kubadda Birta Birta
Ku soo dhowow inaad nagu soo booqato waab lambar 5A26-1
Ku soo dhowow inaad nagu soo booqato booth No. 5A26-1 Waxaan u soconaa inaan ka qeybgalno bandhigga waalka adduunka ee Dusseldorf Germany laga bilaabo 27-29th Noofambar. Ku soo dhowow inaad nagu soo booqato waab lambar 5A26-1. Waxaan ka qeyb galaynaa bandhigga waalka adduunka ee Dusseldorf Jarmalka laga bilaabo 27-29th Nofeembar. Ku soo dhawow inaad nagu soo booqato boot ...
Ku soo dhowow saaxiibbada inaad na soo booqato!
Future Madax Ball Co., Ltd, oo la aasaasay 2004, shirkaddu waxay leedahay in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo cajiib ah soo saarista kubbado tayo sare leh & KURSIYO iyo QAYBAHA KALE ee Ball Valves. Adkaysiga iyo takhasusku wuxuu ka dhigayaa shirkad qalabaysan oo si wanaagsan loo maamulo. Waxaa lagu caddeeyay ISO9 ...
Bandhiga saliida, gaaska, turxaan bixinta iyo kiimikada kiimikada
Waxaan ka soo qeyb geli doonnaa Bandhigga 22-aad ee Caalamiga ah ee Iran, Gaaska, Sifeynta iyo Batroolka Kiimikada laga bilaabo 6- 9-ka Maajo 2017. Ku soo dhowow inaad nagu soo booqato Hall 38, 1638. Ku saabsan Bandhigga Soo-saaraha labaad ee ugu weyn ee OPEC, Iran waxay fadhidaa boqolkiiba 11 saliid iyo boqolkiiba 18 gaaska adduunka. Sannad kasta, ...
Shirkadda Ayaa Ka Qayb Galeysa PCVExpo 2016 Moscow
Bandhigga PCV waa carwo caalami ah oo lagu ganacsado matoorada, kombaresaradayaasha iyo filtarka. Carwaddani waa kulan xog-warran oo muhiim ah oo ku saabsan arrimaha qalabka sambabada, filtarka, matoorrada iyo matoorada. Soo-saareyaasha caalamiga ah waxay ku soo bandhigaan Expo PCV hal-abuurnimadooda ugu dambeysay iyo teknoolojiyadda gudaha ...
Isagoo siibaya aagga warshadaha, magaalada oubei, wenzhou, gobolka zhejiang, Shiinaha.